Horudhac: FC Porto vs Chelsea… (The Blues oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato caawa kaddib xasuuqii West Brom) – Gool FM
Horudhac: FC Porto vs Chelsea… (The Blues oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato caawa kaddib xasuuqii West Brom)
(Seville) 07 Abriil 2021. Kooxda Chelsea ayaa doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kaddib guuldarradii xanuunka badnayd ee ay kala kulmeen West Bromwich Albion, marka ay u safrayaan Magaalada Seville lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonaan FC Porto.
Martigaliyeyaasha kulanka caawa ayaa ka badiyay Juventus, waxaana ay soo bandhigeen qaab ciyaareed xiiso leh si ay u soo gaaraan booskooda wareegga siddeed dhammaadka Uefa Champions League, halka Chelsea ay Atletico Madrid ku reebtay wareegga 16-ka tartankan.
FC Porto waxaa ka maqnaan doona labada lammaane ee muhiimka ah Mehdi Taremi iyo Sergio Oliveira kulanka lugta hore ee wareegga siddeed dhammaadka Champions League oo ay caawa wajahayaan Kooxda Chelsea.
Taremi ayaa si doqonnimo ah looga saaray kulankii Juventus markii ugu dambaysay ee tartankan, waxaana Oliveira uu isna ku maqan yahay ganaax kaararka digniinta ah.
Ciyaaryahanka amaahda ah ee Liverpool, Marko Grujic ayaa laga yaabaa inuu ku bilowdo bilow dhif ah khadka dhexe ee kulankan, iyadoo Luis Diaz uu ku xigi doono si uu ugu soo bilowdo weerarka, maadaama Taremi uu maqan yahay.
Malang Sarr wuu la ciyaari karaa kooxda milkiyaddiisa iska leh ee Chelsea, laakiin uma badna inuu ku soo bilaaban doono safka hore.
Zaidu Sanusi ayaa taam u ahaa inuu kursiga keydka fadhiyo bilowgii isbuucan, taasoo ka dhigtay Mouhamaed Mbaye iyo Ivan Marcano inay yihiin kuwa kaliya ee dhaawaca ka qaba Porto.
Tababare Thomas Tuchel ayaa qirtay inuu N’Golo Kante kaliya taam u noqon doono inuu kursiga keydka fariisto kulanka caawa.
Antonio Rudiger ayay ahayd in tababarka laga soo diro horraantii Axadda kaddib markii ay isku dhaceen goolhayaha Kepa, laakiin Tuchel ayaa xaqiijiyay inuu kulankan ku soo bilaaban doono.
Thiago Silva waxa uu ciyaaray ciyaar cabsi leh kulankiisii ugu hotreysay ee uu ka soo laabtay dhaawac isbuucaan, laakiin waxaa laga yaabaa inuu helo booskiisa haddii Rudiger laga tago.
Christian Pulisic uma badna inuu soo kabsan doono ka hor kulanka FC Porto kaddib markii uu dhaawac kale oo muruqa ah ka soo gaaray Kulankii Sabtidii ee West Brom.
Kai Havertz ayaa laga yaabaa in lagu aamino inuu weerarka kooxda la hoggaamin doono Timo Werner iyo Olivier Giroud kulanka caawa.
Callum Hudson-Odoi iyo Reece James ayaa ku tartamaya booska garabka midig ee daafaca.
>- FC Porto ayaa laga badiyay shan ka mid ah siddeedii kulan ee UEFA Champions League ay la ciyaareen Chelsea (2 guul iyo 1 barbaro), kaliya Kooxda guuldarrooyin ka badan ay ka soo gaareen tartanka waa Real Madrid (6).
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii labaad ee ciyaaraha bug-baxa tartanka UEFA Champions League ku dhexmara kooxaha Chelsea iyo Porto, iyadoo Blues ay ku soo baxday 3-2 wadar ahaan intii lagu jiray wareeggii 16-ka ee fasal ciyaareedkii 2006-07.
>- Kooxda Chelsea ayaa guuleysatay lix ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka Champions League.
>- Chelsea ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay lix ka mid ah siddeedeedii kulan ee ay ciyaartay Champions League.